ကြည်လင်းနှင့်အမှုတွဲများ ကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ်မကျခံရစေရေး ရန်ကုန်ဘုရားငါးဆူသို့ လှည့်လည်ကာ တ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ – လူ သတ်မှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည့် ကြည်လင်းပါလေးဦးအား ကြီးလေး သောပြစ်ဒဏ်မှ လျှော့ပေါ့ ကင်း လွတ်စေရန်အတွက် ဘုရားငါးဆူ သို့လှည့်လည်၍ တစ်ကိုယ်တော် ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် နံ နက် ၇ နာရီကျော်ခန့်တွင် ပုဇွန် တောင်မြို့နယ်ရှိ ရွှေဘုန်းပွင့် ဘုရားမှစတင်ကာ ဦးညီညီထွန်း ဆိုသူက တစ်ကိုယ်တော်ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဗိုလ်တထောင် ဘုရား၊ ရွှေတိဂုံဘုရား၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားနှင့် အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ကျောက်တော်ကြီးဘုရားသို့ သွား ရောက်ကာ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ကာယ ကံရှင် ဦးညီညီထွန်းကပြောသည်။
ဆုတောင်းသူ ဦးညီညီထွန်း သည် ¤င်းဝတ်ဆင်သော အင်္ကျီ ရှေ့ဘက်၌ ”ဦးကြည်လင်းပါ လေးဦးအား ကြီးလေးသောပြစ်ဒဏ်မှ ကင်းလွတ်ပါစေ”ဟု စတစ်ကာကပ်ထားပြီး အင်္ကျီနောက်ကျော နှင့် စီးနင်းသည့် ကိုယ်ပိုင်ကား ပေါ်တွင် ကြည်လင်းပုံနှင့် ”လူ သတ်ခြင်းကို အားမပေးပါ။ ကန့် ကွက်ပါသည်”ဟု စာသားကပ် ထားသည်။
ဆုတောင်းရာ၌ ဘုရားများ တွင် အရပ်လေးမျက်နှာ တစ်ပတ် ပတ်ကာ ပန်း၊ ရေချမ်း၊ ဆီမီး ပူဇော်၍ မေတ္တာပို့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးညီညီထွန်းက ”ဦးကြည် လင်းပါ လေးဦးပေါ့။ မြောက်ပိုင်း ခရိုင်တရားရုံးမှာ တရားစွဲဆိုခံထား ရတယ်။ မနက်ဖြန်ဆို အမိန့်ချ တော့မယ်။ အမိန့်ချတော့မယ့်ချိန် မှာ ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်မကျနိုင် အောင်ပေါ့။ အဲဒီလိုမကျအောင် ဘုရားမှာ အယူခံဝင်တာပေါ့။ ဆု တောင်းပေးတာပေါ့”ဟု ဒီမိုကရေ စီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
တရားစီရင်ရေး အပိုင်းကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုဘဲ ဗုဒ္ဓ ဘာသာတစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက် ¤င်းတို့လေးဦးကို ရည်စူး၍ ဆုမွန် တောင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ¤င်းက ပြောသည်။
အမိန့်ချမည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် (ယနေ့)တွင်လည်း တရား ခွင်သို့ လာရောက်နားထောင်ပြီး ဆုတောင်းပြည့် မပြည့်စောင့်ကြည့် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ¤င်းက ဆက် လက်ပြောသည်။
ဆုတောင်းမှုအတွက် သက် ဆိုင်ရာမြို့နယ် ငါးမြို့နယ်ရှိ ရဲတပ် ဖွဲ့များသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားထားသည်။
ယင်းဆုတောင်းမှုပြုလုပ် သည့်အပေါ် အများပြည်သူလူထု က ဝေဖန်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် နေ ထိုင်သည့် ရပ်မိရပ်ဖဦးကောင်း စံက ”နံနက်ကလာပါတယ်။ သူ့ ကတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ” ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
ဆုတောင်းမှုအပေါ် မှတ်ချက် မပေးဘဲ လူအခွင့်အရေးအရ လုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တရားလို ရှေ့နေ၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ပြော သည်။
”လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ် ယူဆမြော်မြင်လို့ရတယ်။ သူ့တို့ရှု ထောင့်ကနေ သူတို့လုပ်တဲ့ကိစ္စပဲ။ ဒါတရားရုံးကနေ ဆုံးဖြတ်မယ့်ကိစ္စ လေ။ ဆုံးဖြတ်တာကို နားထောင် ရုံပဲ” ဟု ¤င်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေး သို့ ပြောသည်။
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့်က ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီ အား သေနတ်ဖြင့် အနီးကပ်လုပ် ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး တရားခံ ဖမ်းဆီး ခဲ့သူ တက္ကစီယာဉ်မောင်း ကိုနေ ဝင်း သေနတ်ထိမှန်သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် (ယနေ့)တွင် အပြီးသတ်ချမှတ်ရန် ချိန်းဆိုထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသား လူပွဲစားနှစ်ဦး၏အကူအညီဖြင့် ပြည်တွင်းအထိဝင်ရောက် ငွေလိမ်လည်ရယူသည့် ထို?
အရက်ကြော်ငြာများကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများက ထိရောက်စွာ အရေးယူရန် ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး